I-Semalt Expert: I-API okanye Iyona ndlela eyona ndlela yokugqwesa idatha kwi-Website
I-interface yolwazi yesicelo okanye i-API yenza isofthiwe kunye nezixhobo zakho zixubane. Siphila kwihlabathi elinokukhawuleza, apho yonke into iyatshintsha ngokukhawuleza, kwaye sifuna ukugcina ixesha lethu namandla. Izinto eziqhelekileyo zokukhupha izixhobo zingadla ixesha elininzi kwaye zenze kube nzima ngathi ukuqhuba amashishini ase-intanethi, kodwa i-API yenza njengamandla okuqhuba zonke iiplatifti zentlalo. Akuncedi kuphela ukukhipha idatha efanelekileyo kwiwebhusayithi kodwa kwakhona ihlela idatha ekhishiwe kwaye yenza ukuba ifundeke kwaye ihlaziywe kubasebenzisi. Ngoko, kukhuselekile ukuthetha ukuba ii-API yindlela efanelekileyo yabaprogram kunye neenkcukacha zokunxibelelana nezicelo zabo.
I-API isebenzisana namaphepha ezobugcisa:
Iingcali zikholelwa ukuba i-API yikhowudi echanekileyo ebhaliweyo yenzululwazi yesazisi eyenza kube lula ngathi ukuba sikhiphe idatha kwiqela elikhulu lewebhu. Iyakwazi ukujongana namaphepha obugcisa kunye nokwazisa ulwazi lwabo. Ngokomzekelo, i-Facebook Graph APIs isetyenziselwa ukufumana nokukhangela idatha kumaphepha e-Facebook, uluntu kunye namanye amanethiwekhi afanayo.
I-API - Indlela elula yokuchonga idatha
Njalo xa sifuna ukufikelela kwiinkcukacha zewebhusayithi ethile kufuneka sisebenzise ama-API. Ngokungafani nezinye iinkqubo eziqhelekileyo zokukhutshwa kwedatha kunye nobuchule, i-API yenza ngokukhawuleza umsebenzi wayo kwaye inokukhangela idatha yakho kwiilwimi ezingama-120. Ngoko nokuba ufuna ukukrazula ulwazi kwiwebhsayithi yeTshayina okanye ufuna ukukhipha ulwazi kwi-blog yaseJapan, i-API izakukhupha okanye iyifake kwangoko kwimiyalelo yakho.
Kutheni i-API ibalulekile kumashishini?
Ukuba unenani elikhulu lamakhasi ewebhu kwaye ufuna ukukhipha idatha kubo bonke phakathi kweyure okanye ezimbini, i-API yindlela enhle yokwenza loo nto. Kuphela kufuneka uvule i-API ukuze udonse idatha echanekileyo. Inceda ama shishini ngale ndlela zintathu:
1. Amashishini angenza ii-API
ishishini lingazenza izicelo ezahlukeneyo ngama APIs ngaphandle kokuyekezela kumgangatho. Ezinye iinkampani ze-intanethi zithengisa izixhobo kunye nesofthiwe kwaye zithembele ekutsaleni ulwazi kwi-API evulekile ukukunceda ukuhlaziya inkqubo yabo yezoshishino. Enyanisweni, ngaphandle kwe-API, ishishini alikwazi ukukhula kwaye ayikwazi ukudala ii-apps ezifanelekileyo kubathengi bayo.
2. Uphando lwegama elingundoqo
I-API ibalulekile kumashishini kuba ivumela abaprojekthi ukuba bakhe izixhobo zokucoca zewebhu (amazing). Ezi zixhobo zisinceda senze imisebenzi yethu ngendlela engcono. Ngokomzekelo, ii-API ezisisiseko-magama ezisisiseko zenza kube lula ngathi ukuba sithole amagama angundoqo kunye neengongoma zewebhu. Ngethuba ukwahlula idatha, ii-API zinyamekela iikopi zethu eziphambili kwaye zingatshintshi okanye zitshintshe kwimveliso.
3. I-API ilungile kubaphuhlisi kunye nabaqulunqi
Bobabini abathuthukisi kunye nabaprogram bangazuza kuma-API kwaye banokunika abathengi babo ithuba elihle kakhulu. Ngokomzekelo, i-Reddit yasungulwa njenge-app yeselula kwaye ixhomekeke kwizixhobo ezininzi kunye neenkonzo zokukhutshwa kwedatha ukwenza imali ngokwayo. Ngoku iRuddit ingomnye wemithombo ephambili ye-web traffic. Ukusebenzisa i-API, unokwenza iiforam ezinjenge-Reddit kwaye unokubandakanya abantu abaninzi nangaphezulu kwiintsuku ezimbalwa Source .